Japana · Septambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Japana · Septambra, 2017
Tantara mikasika ny Japana tamin'ny Septambra, 2017
Ilay Fetiben'ny Zavakanto Fahaterahan’ Ishinomaki Indray
Mediam-bahoaka 25 Septambra 2017
Sitrana araka ny hitamaso tamin'ny fihovitrovitry ny tany sy ny tsunami tamin'ny taona 2011 ny tanànan'i Ishinomaki, saingy tsy mbola tafaverina tamin'ny heriny teo aloha. Midira amin'ny Fetiben'ny Zavakanton'ny Fahaterahana Indray.
Jereo Ny Tokyo Camera Club Raha Liana Sary Mahatalanjona Japoney Ianao
Mediam-bahoaka 20 Septambra 2017
Afaka mamahana sary ao amin'ny Tokyo Camera Club avokoa ny olona rehetra izay monina ao Tokyo na tsia raha toa ka mbola maneho toerana iray ao Japana izany sary izany.
Milina Mpivarotra Manerana Izao Tontolo Izao Ka Nahagaga Ny Japoney
Rosia 20 Septambra 2017
Na mendrika na tsia, nanana laza hatry ny ela fa manana milina fivarotana hafahafa sy mampihomehy i Japan. Ny tsy fantatry ny besinimaro anefa, dia ny eritreritr'ireo Japoney momba ireo milina hafa mpivarotra any amin'ny firenena hafa.
Media sy Fanoratan-gazety 06 Septambra 2017
"Mahery ireo mpanjifa," hoy ny iray amin'ireo nohadihadiana. "Manaiky ihany aho ny farany... Ka na inona na inona teren'ilay mpanjifa hataoko, tsy dia afaka mandà loatra aho."
Toerana Be Mpitsidika Ireo Toerana Misy ‘Haikanto’ Tsy Mahazatra / Maningana
Hehy 03 Septambra 2017
"Rehefa mivenjivenjy manerana ny tanàna, indrindra any amin'ireo kianja sy toerana filalaovana... Teo ampanontaniana tena momba ny hoe iza sy ny hoe natao ho amin'ny inona izy ireny... na tsy mbola azoko antoka aza ny ho valiny."